Mampidi-doza ve ny rohin'ny automated mampidi-doza ho an'ny tranonkala fitadiavana fikarohana?
Misy finoana fa ny 20100 no rava ny fanorenana rohy. Io foto-kevitra io dia noresahana imbetsaka, saingy mbola tsy misy fanambarana mazava momba izany.
Amin'ny ankapobeny, ny fanorenana rohy manjary dia dingana arahina miezaka mafy hampitombo ny isan'ireo rohy mankany amin'ny loharano. Fotoana mandany fotoana izao izay mitaky ezaka be. Ny fanorenana rohy ny rohy dia matetika mifandray amin'ny fomba organika amin'ny famoronana rohy.
Rehefa mikaroka ireo tranonkala TOP laharana ao amin'ny lohanao ianao dia mahita ny isan'ny rohy izay manondro azy ireo. Manana rohy an-jatony an'arivony izy ireo avy amin'ny loharanom-baovaom-pejy avo lenta sy avo lenta. Mazava ho azy, ny rohim-pifandraisan'izy ireo dia tsy nipoaka nandritra ny alina. Ireo tranonkala TOP TOPO dia mahazo valiny toy izany amin'ny alàlan'ny fiasa am-pahaizana sy mamorona rohy mankany anaty.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny teknika fananganana rindran-damina sy automatique isika. Ankoatra izany, hifanakalozanay hevitra ny fomba hanohanan'i Google ny tsipika momba ny valin'ny fambolena voajanahary sy tsy ara-boajanahary. Hizara ny toro-làlana mahomby indrindra sy ny paikady mahazatra aho izay hanome anao ny vokatra SEO tsara.
Ahoana ny fomba hanatsarana ny tranokalan'ny habaka?
Amin'izao androntsika izao ny famoronana rohy dia lasa sarotra noho ny hatramin'izay noho ny fifaninanana avo lenta amin'ny tsena nomerika ary ny fiovaovan'ny algorithm motera fohy. Ny rohy mifototra amin'ny fananganana teknolojia izay ankatoavin'ny Google dia mety ho tetikady spammy rahampitso. Na izany aza, na dia eo aza ireo fiantraikany ratsy ireo, ny backlinks dia mbola mitondra hery mitaona izay afaka manatsara ny toerana misy anao ary mamorona fifamoivoizana amin'ny tranokalanao. Webmasters izay tsy te handany fotoana betsaka amin'ny famoronana rohy organika manoloana rindrambaiko rindrambaiko rindrambaiko na mikaroka fahafahana mifototra amin'ny fifandraisana. Na dia izany aza, araka ny fampiharana, dia tsy misy tsara kokoa noho ny fanorenana rohy voajanahary. Tsy tokony handray anjara amin'ny teknolojia fananganana hosoka ianao raha toa ka ho hitan'ny Google izany. Isika izao dia eo amin'ny sisin'ny fanavaozana fikarohana vaovao ary ny fahazoana tsaratsara kokoa ny spammy backlinks dia mety handrava ny ezaka rehetra ataonao SEO sy ny lazan'ny marika.
Firaketana an-tsoroka manohitra ny iray
Rehefa tapitra ny lamin'asa fanorenana tsy misy lanjany, dia mila mamorona rohy mitovy. Izany no mahatonga antsika hanangona teknikam-pandrafetana mahomby izay hanampy amin'ny fankasitrahana anareo.
Fanehoan-kevitra sy blaogy
Ny valin-kevitra dia fomba tsotra sy mahomby amin'ny fahazoana rohy, raha mbola mamela azy ireo amin'ny PR ianao tranonkala. Ny hevitrao dia mila mifandray amin'ny lohahevitra ifanakalozan-kevitra ary miara-mandeha amin'ny hafa. Google tsy hamaly ny tranonkalanao raha toa ka natao ny fomba fanehoan-kevitra. Raha vita izany amin'ny tanana, dia toa ny logic, ny kitapo mankany amin'ny teboka ary manana ny lanjany ho an'ny mpamaky hafa. Na dia izany aza, araka ny voalazan'ny Google Webmaster Guidelines, ny fanehoan-kevitra amin'ny forum amin'ny rohy azonao atao amin'ny lahatsoratra na ny sonia dia tsy horaisina ho kalitao ary ho mendrika sazy.
Tetik'asa fanorenana hafa mahomby izay miasa mandrakariva dia ny bilaogy vahiny. Ny sasany amin'ireo webmasters dia milaza fa tetikady spammy amin'ny famoronana rohy. Na izany aza, ny marina dia azo lazaina, raha vita tsara, dia hitondra vokatra tsara ho an'ny fanatsarana. Hiresaka momba ny blaogin'ny vahiny aho amin'ny maha-ampahany amin'ny fanentanana fananganana fanavaozana. Mila mamorona votoaty ianao fa tsy tanjona iray fotsiny hanatsarana ny toerana misy anao, fa amin'ny fikasana hitondra valisoa ho an'ny mpamaky anao. Raha manamboatra ny votoatiny amin'ny mpamaky iray ianao, dia azonao ampiasaina ny blaogin'ny vahiny ho fitaovana fananganana rafitra azo antoka Source .